Turaanturoon aad buug la yaab leh!! Waxa ay iga caawiyeen in aan Ilaah la socod iyo Waxaan is arkaa anigoo ku tilmaamayaa in ay mar kale iyo mar kale. Waxay leedahay mabaadiida weyn qaar ka mid ah. cutubka aan ugu jeclahay waa 4 No Masiixiyiinta super. Your buug nolosha wanaagsan waa cabsi aad u!